Gaadiidka Dagaalka Ahlu Suna oo u jiheystay dhanka Cadaado – idalenews.com
Gaadiidka Dagaalka Ahlu Suna oo u jiheystay dhanka Cadaado
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Galagaduud, ayaa sheegaya in gowr dhow halkaasi ay ka dhaqaajiyeen Ciiddamo taabacsan Ahlu sunna Waljameeca oo ku siijeeda Magaalada Cadaado.
Wararku waxa ay sheegayaan in Ciiddamadda Ahlusunna ay ku hubeysnaayeen Gaadiid dagaal,waxaana hor kacaayay Saraakiil ka tirsan Ahlusunna.
Ciidamada ayaa waxa ay kasoo amar qaateen Masuuliyiinta sare ee Ahlu Suna Gobolada Dhexe ayaa lagu soo marya in Ujeedkoodu yahay inay gacanta ku soo dhigaan Xasan Daahir oo hada magangalyo weydiistay Maamul Goboleedka Ximin iyo Xeeb, waxaana Ahlu Suna goor dhow ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Xasan Daahir iyo ciidamada uu wato.
Ciidamada ayaa soo gaaray deegaano aan sidaas uga fogeyn Magaalada Cadaado, waxaana wararka hoose ay sheegayaan in Ciiddamadaasi ay dagaal kula galayaan Magaalada Cadaado ciidamada daacada u ah Xasan Daahir iyo ciidamada Maamulka Ximin iyo Xeeb oo ka arimiya magaaladaasi.
Warar hoose oo laga helayo Gobolada dhexe ayaa sheegaya in Odayaal ay ku baxeen ciidamada Ahlu Suna ee weerarka ku soo qaadaya Magaalada Cadaado, iyadoo la wado sidii lagu qancin lahaa maamulka Ahlu Suna oo dagaalo dheer ay ka dhexeeyaan Alshabaabka uu ka tirsan yahay Xasan Daahir.
Ugu dambeyntii, Xaalada Gobolka Galgaduud ayaa aad u kacsan, waxaana suuragal ah in dagaalo ay ka dhacaan deegaano ka tirsan Gobolkaasi, kuwaasoo dhexmara taageerayaasha Xasan Daahir oo gobolkaas ku xoogan iyo ciidamada Ahlu Suna waljamaaca.
Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka hadlay qadiyadda Dowladda ee Maamulka Somaliland